MAHAFINY Quebec City 2.0 FSX & P3D
Ny tanànan'i Quebec dia renivohitry ny faritanin'i Quebec any Canada. Niorina tamin'ny 1608, izy no tanàna tranainy indrindra any Amerika Avaratra. Ity sehatr'asa feno antsipirihany ity dia misy trano mihoatry ny 135 namboarina tao anatin'izay 3 taona lasa izay. Avia ary jereo izay toa tian'i Quebec City miaraka amin'ireo mari-pamantarana lehibe ao amin'ny simulator sidinao.
Vaovao betsaka FSX/P3D fampiasa dia namboarina hanamboarana ity tranokala mahafinaritra ity toy ny sary mihetsika sy ny fanao manokana.
Votoatin'ilay NY SECENERY 2.0:
-Enfant Jésus Hospital
Canada Coast mpiambina, tanànan'i Quebec base
Helipads A, B sy C
- Quebec Citadel (Miaramila heliport)
- Ile d'Orléans tetezana
- Québec tetezana (amin'ny fifamoivoizana)
- Pierre-Laporte tetezana
- Price trano
- Hilton sy Delta trano fandraisam-bahiny
- Quebec Parlemanta
- National Bank trano
- SAAQ trano
- Dufferin-Montmorency lalambe
- Ancienne-Lorette fiangonana
- Glaverbec fototra sy ny fivoahan-tsetroka (mifanaraka amin'ny fiaingana 06 amin'ny CYQB)
- Montmorency Falls Park tariby fiara sy ny tetezana
- Colisée Pepsi (Coliseum, izay ny Nordiques Quebec nampiasa ny milalao)
- Quebec tanàna racetrack
- Fampirantiana Center (Centre de Foire)
- Museum ny Fandrosoana
- Ultramar orinasa mpanadio
- Petit-Champlain Condominiums sy ny trano
- Groupe Desgagnés trano
- Port an'i Québec varimbazaha elevators
- Levis alalan'ny terminal baka
- Québec alalan'ny terminal baka
- Herinaratra pylons ny L'Ange-Gardien, Ile d'Orléans sy Beaumont
- Vieux-Port tsena
- Massif de Petite-Rivière-Saint-François
- Amundsen (Canadian Coast mpiambina ranomandry-mpandika)
- Super sambo (Ultramar Dock)
- Sambo in "Bassin Louise" Marina
- Québec tanàna sy Levis baka
- Plains Abrahama
- Montmorency milatsaka tariby fiara
Cable fiara no animation amin'ny Montmorency nianjera.
- Loto-Québec firework fifaninanana
Afomanga mitranga isan'andro in Jolay
ary Aogositra avy 9: 00pm ho 10: 00pm mitohy.
- Guns ny Dufferin Terrace
Simulation basy mitifitra ambanin'ny Dufferin Terrace.
Ny fanentanana mitranga ho an'ny 5 minitra tamin'ny ora sy sasany ora.
- Québec-Levis Fenêtre baka, AI endrika
Baka ireo, amin'ny toerana misy anao, voasakantsakan'ny ao an-toerana.
AI dika tsy ampy ao amin'ny "Autres" fampirimana.
Azafady, dia jereo ny "Mariho ny ferries.txt" antontan-taratasy ho an'ny more Info.
Downloads 25 160
Nohavaozina taminy 06-04-2018